Brussels oo uu ka dhacay shir lagu gorfeeyey la dagaalanka burcad-badeeda. – Radio Daljir
Brussels oo uu ka dhacay shir lagu gorfeeyey la dagaalanka burcad-badeeda.
Nofeembar 22, 2009 12:00 b 0
Brussels, Nov 22 – Maalintii ay taariikhdu ahayd 19 novembar 2009 xaruunta Baarlamaanka Midowga Yurub ee ku taal magalaada Brussels, casimada dalka Beljum, waxaa ka dhacay shir muhiim ah oo looga hadlay sidii xal siyaasadeed looga aslixin karo gauiga Soomaaliya gaar ahaan sida xal waara loogu heli karo falalka lagu tilmaamo burcad-badeedka.
Shirkaan muhiimka ah waxaa abaabulay xisbiga Shacabka Yurub (European People’s Party), kaasoo ah xisbi siyaasadeedka ugu kuraasta badan Baarlamaanka Midowga Yurub.
Xisbigaan waxaa la aas’aasey 1976 waxaana ku bahoobay 72 asxaab siyaasadeed oo ka diiwaan gashan 16 dal ee ka mid ah Midowga Yurub.
Baarlamaanka Midowga Yurub guud ahaan wuxuu ka kooban yahay 736 Xildhibaano oo ay soo doortaan 500 milyan oo qofood ee ku kala nool 27 dal oo ku bahoobay Midowga Yurub. Xisbiga Shacabka Yurub waxaay Baarlamaanka Midowga Yurub ku leeyihiin 265 Xildhibaano.
Sida ku cad sawirada hoostaan ku lifaaqan shirkaan waxaa lagu casuumay Danjiraha Soomaaliya u fadhiya xaruunta QM ee Geneva, Mudane Yusuf Maxamed Ismaaciil Baribari iyo Danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Faransiiska, Mudane Siciid Xaaji Maxamuud Dheere.
Wararka naga soo gaarey xaruunta Baarlamaanka Midowga Yurub ayaa sheegay in Danjiraha Soomaaliya u fadhiya Midowga Yurub iyo dalka Talyaaniga Mudane Nuur Cadde inuusan kasoo qeeyb gelin waayo magaalada Rooma, caasimada Talyaaniga, waxaa booqasho rasmi ah ku jooga Raisul Wasaaraha DFKMGS Mudane Cumar Cabdirashid Cali Sharmarke. Wararkaan waxaay kaloo tibaaxeen in maadaama uu Danjire Nuur Cadde hawl kale ku maqnaa in beddelkiisa la casumay Danjire Soomaalya u fadhiya dalka Faransiiska Siciid Xaaji Maxamuud Dheere.
Danjire Mudane Yusuf Baribari wuxuu madasha shirka ka akhriyey khudbad dheer oo ka koobneyd 12 bog (fadlan ka akhriso lifaaqa) oo af-ingiriis ku qoran. Sida ku cad qoraalka Danjiruhu wuxuu mahad celin u jeediyey Xisbiga Shacabka Yurub oo shirkaan abaabulay. Ka dibna wuxuu mahad celin iyo tacsi u tabiyey walaalaheen Qaarada Afrika oo ku hawlan gacan ka geeysashada xasilinta dalkeena hooyo.
Wuxuu kaloo bogaadin iyo amaan u jeediyey Xildhibaanad ka mid ah Baarlaamaanka Midowga Yurub oo u dhalatay dalka Talyaaniga Marwo Cristiana Muscardini oo muddo dheer shacabka Soomaaliyeed la dhinac taagan taageero siyaasadeed, tan iyo sanadihii ina soo dhaafey kuwaasoo aan cidna ka hadli jirin dhibaatada ba’an ka aloosan dalkeena hooyo.
Halkaan baad ka akhrisan kartaan taariikhda iyo wax qabadka Xildhibaan Marwo Cristiana Muscardini.
Ka dib Danjire Mudane Yusuf Bari-Bari wuxuu si qoto dheer oo cilmiyeeysan u sharaxay dhibaatada aan la soo koobi karin ee haysata shacabka Soomaaliyeed iyo sababaha dhabta ah oo ay salka ku hayaan falalka loogu magac daray burcad badeedka. Kuwaas oo kala ah:
1) maraakiibta dalalka Midowga Yurub iyo qaarada Aasiya oo sida ba’an ee sharci darrada ah uga kallumeeystaan badda Soomaaliya.
2) sunta warshadaha reer Yurub iska soo fageeyaan ee lagu aaso Soomaaliya.
Danjiruhu wuxuu si gaar ah u falanqeeyey shaqa la’aanta, caafimaad darrada, wax-barasha la’aanta, iwm ee baaxada waayn leh ee ka jirta dalkeena hooyo. Dhinaca kalena wuxuu Xildhibaanada iyo hawl-wadeenada Midowga Yurub hor dhigay tirakoob 2005 lagu sameeyey maraakiibta sharci darrada uga kallumeysatay dalkeena hooyo, kuwaasoo tiradoodu kor u dhaaftay 800. Danjiraha Soomaaliyeed wuxuu daboolka ka qaaday faa’iidada sanad kaste u soo hoyata shariikaadka leh maraakiibta kallumeysiga reer Yurub taasoo kor u dhaafta 450 Milyan ee Doolarka Mareekanka, isla amrkaasna ah Dhaqaalihii umada Soomaaliyeed oo lala fakaday amaba la xaday,wuxuuna si geesini leh ugu tilmaamay xatooyo xoolo dadweeyen.
koley taarikhadaa xusi maxaa yeelay waa Masulka kaliya ee ka tirsan DFKMGS ee si cad u sheegay hantida Soomaaliyeed oo ay Reer yurub iyo Aaisya ka boobaan umada Soomalliyeed Sanad walba.
Danjiruhu markuu qodobkaan carrabka ku dhuftay wuxuu barbar dhigey macaawinada uu Midowga Yurub sanadkaste ugu yabooho Soomaaliya, taaso u dhiganta shan meelood meel faa’idada maraakiibta kallumeysiga reer Yurub ay ka helaan suuq gaaynta kallunka Soomaaliyeed oo sharci darrada u jillaabtaan.
Danjire Mudane Yusuf Baribari wuxuu kaloo hoosta ka xariiqey dhaqaalaha uu Midowga Yurub iyo dalal kale ay ku bixiyaan hawlgalka milateri lagu andacoodo in looga hortagayo falalka waxa loogu magac darey burcad badeedka. Sida la ogsoon yahay tirada maraakiibtaas waxeey sare u dhaaftey 30.
Teeda kale wuxuu qeexey sababta maraakiibta isaga gooshta baddeena sare loogu qaadey caymiska maadaama u dalkeena hooyo ku sii kordhayaan falalka loogu magac darey burcad badeedka. Sida la wada ogsoon yahay dalkeena hooyo wuxuu ku yaalaa aag addunka ku leh ahmiyad gaar ah oo istaraatiiji ah.
Hasa yeeshee marka dhinaca kale laga eego, Danjiruhu wuxuu si cad u soo xigtay faalo uu dhowaan ku nuux nuuysadey khabiir ku takhasusey arrimaha Soomaaliya magaciisuna yahay Prof Ken Menkhouse. Oraahda khabiirkaan uu Danjiruhu soo xigtay waxaa ka mid ah: “maadaama ay illaa iyo haddeer ay fashilmeen seddaxdii Qaraar ee Golaha Amaanka QM iyo hawlgalka ay ku hawlan yihin maraakiibta dagaalka, waxaa taagan su’aal oranaysa in maraakiibta dagaalka ay badda Soomaaliyeed u joogaan arrimo la xiriira xog raadin iwm oo ay la dagaalnka burcad badeeda uu yahay maqaar saar”.
Danjiruhu wuxuu si cilmiyeeysan u sharraxay sababta falalka loogu magac daray burcad badeedka ay uga dhacaan inta badan badda ku teedsan Puntland. Sababta ugu muhiimsan wuxuu ku tilmaamey mid dabiici ah oo uu alle abuuray, taasoo ah cimilida badda Puntland.
1) 60 Km baa u dhaxeysa xeebteena iyo bohosha aad u dheer ee ku taal badweeynta;
2) waxaa jirta mowjad ka dhalata badda hoosteeda taas oo sare u soo qaada nafaqada uu kalluunka ku nool yahay.
Badda ku teedsan Puntland waxaay ka mid tahay shanta goobood oo ugu kalluun badan adduunka oo dhan.
Danjiruhu wuxuu kaloo soo xigtay qoraal cilimiyeeysan oo uu dhoowr bilood ka hor uu qoray Mudane Maxamed Abshir Waldo kaasoo falalka kallumeysiga sharci darrada, aasida sunta haraadiga warshadaha dalalka horey u marey iyo afduubka maraakiibta u bixiyey: falalka burcad badeedka mataanha ah (twin piracy).
Ka dib bur-burkii nidaamkii kaligii taliyihii Alle ha naxariistee Maxamed Siyaad Barre, maraakiibta kallumeysiga addunka waxaay ku soo jabeen badda Soomaaliyeed gaar ahaan mida ku teedsan Puntland, waxeeyna ku dhiiradeen in ay xeebta agteeda ka kallumeystan. Arrintaan oo ku saleesan xad gudub aan xad lahayn, waxeey kalliftay in kallumeeysatada Soomaaliyeed ay ka dhidhiyaan iskana caabiyaan.
Sida aynu wada ogsoonahay sanadihii la soo dhaafay maraakiibtaan waxeey si naxaariis darro ah u dileen kallumaysato Soomaaliyeed oo tiro badan.
Danjiraha Soomaaliyeed wuxuu Xildhibaanada Midowga Yurub labo jeer su’aaley. Maxeey tahay sababta aan Qaraarada QM, Midowga Yurub iyo gaashaanbuurta NATO loogu soo hadal qaadin sharci darrada looga kallumeysto badda Soomaaliya?
Sababta kale ee sida gaarka ah xasaasiga u ah oo dhallin yarada Soomaaliyeed ku kalliftay in ay ka dhiidhiyaan waa sunta haraadiga warshadaha ee halista ah oo dalkeena hooyo lagu aaso.
Danjire Yusuf Baribari wuxuu si cad oo ay ku dheehan tahay wadaninimo iyo geesinimo lixaad leh qodobada kor ku xusan ku sifeeyey in ay sal u yihin falalka loogu magac darey burcad badeedka.
Sharaxaadaan dheer ka dib wuxuu u gudbay xalka uu u arkey in uu habboon yahay.
Ugu horrayn wuxuu hoosta ka xariiqey in dhibaatada jirta ay tahay mid ka aloosan carriga Soomaaliyeed taa awgeedna uu si cad ugu booriyey in DFKMGS iyo Dowladda Puntland ee Soomaaliya lagala tashado qorshe kaste ku saleesan sidii xal waara loogu heli lahaa sababaha salka u ah falalka loogu magac darey burcad badeedka.
Gaar ahaan wuxuu ku booriyey in Dowladda Puntland ee Soomaaliya la siiyo dhaqaale iyo taakuleen qalab ay u baahan tahay si ay ugu adeegto shacabka Soomaaliyeed ee tabaaleysan gaar ahaan kuwa ku nool xeebta. Iyo qalabka lagu sugi karo amaanka berriga iyo baddaba.
Danjiraha Soomaaliyeed wuxuu ku baaqey in sida ugu dhaqsi badan dalkena hooyo gudahiisa lagu qabto shir-weyne caalami ah oo heer sare oo looga hadlahayo sida xal loogu heli karo sababaha salka u ah falalka loogu magac darey burcad badeedka.
Danjire Mudane Yusuf Baribari wuxuu si cad hoosta uga xariiqay in falalka loogu magac daray burcad badeedka ha noqdeen kuwa kallumaysiga sharci darrada, sunta la aasayo ama maraakiibta la af duubayo ay intuba ka soo hor jeedaan danta shacabka Soomaaliyeed. Taa awgeedna waxaa loo baahan yaahay in si deg deg ah loo maareeyo.
Sidoo kale wuxuu ku baaqey in si deg deg ah loo adeegsado waaxda farsamo ee Booliska iyo Ciidamada Qalabka Sida ee AMISOM (engineering corps) kuwaasoo inta badan loogu gurmado Shacabka dhibaataysan marka uu dhaco dhul gariir, daadad, abaar iwm. Inta ay gar gaarkaan u fidinayaan Shacabka Soomaaliyeed waxaay qalabayn iyo tababari karaan waaxda Ciidanka iyo Booliska Soomaaliyeed. Waxaan 100% habboonaan laheeyd in barnaamijkaan uu dhinac socdo dhismaha Ciidanka Soomaaliyeed ee Badda ilaaliya.
Danjiruhu wuxuu si cad u codsadey in si deg deg ah shacabka Soomaaliyeed ee sida ba’an u dhibaateeysan loo qodo ceelal biiyo, loogu dhiso rug caafimaad, dugsi waxbarasho, guryo rakhiis ah, dekedo yar yar loogu talo galey kalluumeysatada, iwm. Iyo in la dhiso hay’ado ay ka mid yihin:
1) Hay’adda Daryeelka Badda iyo khayraadka badda ku nool (Somali Marine Agency);
2) Hay’adda Daryeelka Bay’adda, Somali Civil and Environmental Protection Unit (Early Warning System including monitoring, assistance and prevention of any natural or man-made calamities) iyo;
3) Dugsiga Badda (Somali Maritime School).
Intaa waxaa dheer lehna ahmiyad gaar ah in la hir geliyo mashaariic hor u marin dhaqaale iyo in la dhiso shirkado kallumeysi (joint ventures) kuwaasoo saami laga siiyo kallumaysatada Soomaaliyeed ee dan yarta ah. Iyo in shirkadahaan cusub loo ogolaado in si toos ah u suuq geeyaan dalalka ku bahoobay Midowga Yurub iyo Aasiya kalluunka ay jillaabtaan.
Haddii qorshaha kor ku xusan la fuliyo, Danjiraha Soomaaliyeed wuxuu hoosta ka xariiqey in shacabka Soomaaliyeed ay si dhab ah u dareemi doonaan in la sugayo xaqa ugu muhiimsan uu aadanuhu leeyahay, kaasoo ah in uu ku noolaado nolol sharaf iyo karaama leh. Danjiruhu wuxuu ka digey in haddii ay dhibaatada haddeertaan aloosan sidaas lagu eegto ay ka dhalan doonto cawaaqib xumo.
Danjiruhu wuxuu ku nuux nuuxsadey dhaqaalaha ku baxa hawlgalka maraakiibta dagaalka Midowga Yurub, kuwaasoo aan so hoyi karin natiijo wax ku ool ah waayo badda oo baaxad weeyn, hab dhaqanka ragga loogu magac darey burcad badeedka iyo in dhibaatadaan lagu xallin karo berriga, laguna xallin karo hor u mar dhaqaale. Taas oo in aad u abadan ka yar dhaqaalaha ku baxa hawl galka maraakiibta dagaalka.
Danjire Mudane Yusuf Baribari wuxuu Xildhibaanada iyo dhamaan dadka ka soo qaayb galey shirka u turjumay tixda Soomaaliyeed ee oranaysa:
Seddax lagama biskoodo:
1) Gardarro garab og;
2) Gaajo guri og iyo
3) Bugto geeri og.
Wuxuuna ku yiri tixdaan waxeey si dhab ah u koobeeysaa dareenka ku jira shacabka Soomaaliyeed.
Danjiruhu wuxuu kaloo ku baaqey in urururada bulshada rayidka oo wax qabadkoodu muuqdo ay ciyaari karaan kaalin muhiim ah sidii shacabka looga dhaadhicin lahaa dhibaatada loogu magac darey burcad badeeda ay ku hayaan bulsha weeynta Soomaaliyeed.
Khudbadiissi dheereeyd Danjiruhu wuxuu ku gunaanadey qeeyb ka mid ah khudbaddii uu 28 Oktoobar 2009 Raisul Wasaare Mudane Cumar Cabdirashid Cali Sharmaarke ka jeediyay daarta loo yaqaan Chattam House oo ku taal magaalada London. Sida la wada ogsoon yahay Raisul Wasaaraha wuxuu hoosta kaga xariiqey in shacabka Soomaaliyeed uu xaq u leeyahay in uu helo nabad iyo hor u mar. Ajaanibtii shirkaas ka qaayb gashey wuxuu si toos ah u su’aaley meesha laga soo jillabay kallunka loo nadiifiyey ay cunaan? Wuxuuna ku tilmaamay nasiib darro in Soomaalida lagu sifeeyo burcad badeed maadaama baddoodu loogu yimid. Wuxuu sidoo kale xalka ugu wanaagsan ku tilmaamey hor u mar dhaqaale in loo fidiyo Shacabka Soomaaliyeed. Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke wuxuu hoosta ka xariiqay in uu doonayo in uu joojiyo falalka sharci darrada, wuxuuna ku nuux nuuxsaday in Soomaalida oo kaliya ay xasilin karaan dalkooda.
Wuxuu si cadaan ah daboolka uga qaadey in QM, Midowga Afrika,
Midowga Yurub, Mareekanka ama Ingiriiska aysan dejin karin dalkeena hooyo. Wuxuuna ku dhiidhiyeey in Soomaalidu ay xasilin doonaan dalkooda hooyo.
Danjiraha Soomaaliyeed wuxuu khudbadiisa ku gunaanadey in DFKMGS iyo Dowladaha kale ee ka dhisan gobolada Soomaaliya ay dadaalayaan, wuxuuna ka codsadey dalalka Soomaaliya saaxiibada la ah ama daneeya in Maamulada dalkeena kala shaqeeyaan mashaaric hor u marin dan u ah labada dhinac.
Khudbadda Danjire Mudane Yusuf Baribari ka dib waxaa hadalka qaatey hawl wadeen sare ka tirsan Midowga Yurub. Wuxuu soo dhoweeyey khudbadda Danjiraha Soomaaliyeed wuxuuna sharaxay nuucyada mashaariicda ay ka fuliyaan Soomaaliya. Wuxuu kaloo xaqiijiyey in ay dhab tahay in kallumaysiga sharci darrada iyo sunta lagu aaso Soomaaliya ay sabab u yihin falalka loogu magic darey burcad badeedka. Hasa yeeshee sida la wad ogsoon yahay ragga ka faii’deysta af duubyada maraakiibta shisheeye ay dantoodu tahay madax furashada ay ka helaan.
Hawl wadeenkaan sare wuxuu soo bandhigay tirada maraakiibta sharci darrada uga kallumaystay Soomaaliya sanadkii 2007. Taas oo sare u dhaaftey 1000 maraakiib. Isagoo hadalkiisa sii watey wuxuu yiri in haddii badda Soomaaliyeed ay hesho Dowlad daryeelaysa kana ilaaliso maraakiibta tirade badan ee ka kallumaysta in kallunku uu dib ugu tarmi doono.
Hawl wadeenkaan wuxuu kaloo daboolka ka qaadey in xukunkii kaligii taliye Alle ha unaxariistee Maxamed Siyad Barre uu heshiis laga galay shirkado kala duwan si dalka Soomaaliya loogu aaso 500000 oo tan ee suntan haraadiga warshadaha dalalka horey u marey. Wuxuu ku darey in lacagta lagu heshiiyey ay aheeyd 80 Milyan oo Doolar. Ka dib marka xukunkii kaligii taliyahii uu bur buray shirkadihii heshiiskaas loo saxiixey hawshooda beey si wateen, waliba ayagoo kharash aad u yar ku bixiyay.
Markuu warbixintiisa dhameystay, dhoowr Xildhibaano baa hadalka qaatey. Waxeey soo dhoweeyeen oo ay ayideena khudbaddii dheereeyd uu goobta ka akhriyey Danjire Mudane Yusuf Baribari. Hasa yeeshee haweeney u dhalatey dalka Faransiiska darajadeeduna tahay Danjire oo Wasaarada Arrimaha Dibedda dalkeeda xiriirye uga ah la dagaalaanka falalka burcad badeedka adduunka oo dhan waxeey dhoowr jeer isku deyday in ay dafirto in marakiib laga leeyahay dalalka ku bahoobey Midowga Yurub ay si sharci darro ah uga kallumeystaan Soomaaliya.
Maadaama uu Danjire Mudane Yusuf Baribari ku adkeeystay in ay jiraan uuna diidey in uu carrabka ku dhufto dalalka laga leeyahay, waxaa hadalka qaatey Gaashaanle Sare ee Cidamada Badda Faransiiska oo ka mid ah taliska hawlgalka milateri ee loo yaqaan Atlanta uu leeyahay Midowga Yurub. Gashaanluhu wuxuu taageeray warbixinta Danjire Mudane Yusuf Baribari. Mowqifka Gaashaanluhu waji gabax buu ku noqday haweeneydaas damacday iney dafirto xaqiiqada jirta.
Ugu dambeeyntii shirkaan waxaa ka hadley Masuul ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Diibedda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Jibuuti ka ahna National Focal Point (xiriiriyaha guud ee u qaabilsan arrimaha Soomaaliya iyo la dagaallanka burcad badeedka). Wuxuuna ahaan jiray Ku Xigeenka Qunsulyadda Soomaaliyeed ee Brussels. Waxaana dhalay Alle ha naxariistee Wasiirki hore ee Gaashaandhigga Jibuuti
Mudane Maxamed Idris Faarax wuxuu ku celceliyey sida ay u habboon tahay in ciidamada Soomaaliyeed lagu taba baro Jibuuti. Sida la wada ogsoon yahay Mareekanka waxaay go’aan ku gaareen in Uganda ay ku tababaraan ciidaan Soomaaliyeed. Dalalka Midowga Yurubna sidookle waxaay go’aan ku gaareen in ay iyaguna Uganda ku tababaraan ciidan Soomaaliyeed, asgoo taa ka faaideysanay ayuu arinkaas madashii ka jeediyay.
Labada Danjire Soomaaliyeed ee shirka laga casumay su’aal baay madasha ka jeediyeen ka dib marka hawlwadeeno dowlada Faransiiska oo ugu horreeyo Wasiirka Difaaca iyo hawlwadeenka dowlada Jibuuti ay ku adkeeysteen in ciidanka Soomaaliyeed lagu tababaro dalka Jibuuti.
Sua’aasha ey weeydiiyeen waxeey aheeyd: maxeey tahay sababta aan dalka Soomaaliya lagu tababari karin ciidan Soomaaliyeed iyo faa’idada ugu jirta howlahani Dalka Jabuuti?
Dowladda Jibuutina waxey manata ka mid noqotay cadawaga Soomaaliyeed ee jaqaya dhiiga Shacabka Soomaliyeed waxeyna si xad dhaaf ah uga faa’idaysaneysaa burburka Soomaaliya oo dalaal ka noqoto wax kaste oo Soomaaliya loo qabanayo.
Halkaan hoose ka akhri sirta guracan ee Dawlada Jabuuti iyo profesor Ibi isku baheysteen in ay ku xagal daaciyaan xasilinta Dalka Somalia, iyo burburinta Heshikii DFKMGS iyo Puntland ee Galkacyo 23-August.
Marwooyinka iyo Mudanayaasha sharafta leh ee akhrista Boggan waxana xusuusinayaa,Qaraarkii muhiimka u ahaa umada Soomaaliya uu Golaha Xuquuqal Insaanka QM ee Geneva si aqlabiyad ugu dhawaaqay 2 Oktoobar 2009, Tasoo dor weyn u ka qaatay kana jeediyay Qudbado Ahmiyad weyn ugu fadhiya Shacabka Soomaaliyeed Danjiraha Soomaaliya u fadhiya xaruunta QM ee Geneva, Mudane Yusuf Maxamed Ismaaciil Baribari…
Isku soo wada duuboo shirkaan taariikhiga ah ee 19 november 2009 lagu qabtey Baarlamaanka Midowga Yurub waxaa lagu tilmaami karaa shirka caalamiga ugu horeeya oo si ay ku dheehan tahay geesinimo, wadaninimo iyo hufnaan uu mas’uul Soomaaliyeed u soo bandhigay xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta Soomaaliya, xaq darrada ba’an ee baahsan oo lagu hayo Shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa saboolka ah iyo sida xal loogu heli karo.
Hadda iyo dan DFKMGS, Dowladda Puntland ee Soomaaliya iyo Somaliland waxaa laga dhowrayaa wax qabad dhab ah oo la taaban karo maadaama khatarta iyo dhibaatada sunta halista ee haraadiga warshadaha aysan innaba ha yaraatee shaqo ku lahayn siyaasada hoose la isku haysto, umadana ay iyagu xal kasugayaan, aakhiro iyo aaduuna wax laga weydiinayo umada ay horjoogan.
Waxaa intaa sii dheer in inta aad isku haysataan kursi aan qiimo laheeyn in Shacabka aad matilaysan ay si baaba’ayaan iyo in fowdo kaste sii kordheyso. Taasoo ay la mid tahay suntan dalkeena hooyo lagu sii aasayo, kheeyraadkeena oo sharci darro lagu guranayo, daawo iyo raashin dhacay Shacabka laga iibinayo iwm.
Waxaad ogaataan in muwaadin kaste oo Soomaaliyeed idin su’aalayo yaad madax u tihin. Sidoo kale wuxuu idin leeyahay haddii uu in yar oo damiir ah idinku harey Raxmaanka ka baqa.
Il – allidamaale.com
“Puntland xil ayaa ka saaran amaankeeda, cid kasta oo loo arko in ay wax u dhimaso amnigana sharciga ayaa la hor gaynayaa” Md. Gaashaan.
Warbixin – Safarkii Marwo Caasha Geelle Diriye ee Boston.